तिथि मेरो पत्रु » बिल्ली र नाता सिकेको पांच जीवन पाठ
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Nov. 19 2019 |5मिनेट पढ्न
म पहिलो मेरो प्रेमीले भेट्दा, क्रिस्टोफर, पाँच वर्ष पहिले, कलेज बाट scuffed जूता - म समतल जूता को केवल एक जोडी थियो. मेरो स्नातक अनुभव फिर्ता सोच, म पनि उनलाई लगाएका शङ्का 10 पटक, बरफ को एक इन्च परिसर लेपित नभएसम्म रूपमा उच्च ऐडी र वर्ग देखि मेरो यात्राको को सबै भन्दा गरे, जो बिन्दुमा म एक वेज मा भरोसा. ठिकै छ, म पछिल्लो संवरना (केहि।) हरेक तरिकामा एक Girly केटी, म sweatpants राम्रो बनाउन वा एक मेकअप मास्क बिना मेरो अनुहार देखाउने सहज महसूस कसरी थाहा थिएन, र म यो परिवर्तन हुँदै कहिल्यै foresaw. तर यो गरे, र म यो अन्य महिलाका लागि गर्छ आशा, साथै.
होइन बनोट र stilettos संग केहि गलत हो भनी - तिनीहरूलाई आनन्द उठाउन! बस तिनीहरूलाई निर्भर छैन. जब म पत्रिका हेर्न र मिडिया को स्थिर बौछार हामीलाई आसपास, म किन विश्वास विभाग मा जमीन अस्थिर यति धेरै महिलाहरु छन् आश्चर्य छैन. म मेरो जीवन मा म मेरो feline साथीहरू देखि सिकेकी छु निम्न पाठ र मानिस सीधा-शूटिंग साझेदारी:
1. आफ्नो व्यक्तिगत निशान थालेका छन्: क्रिस मेरो पहिलो गर्मी मिति को एक मा, म देख्यो कसरी फिक्का बारेमा panicked र आत्म-टान्नर गर्न resorted. जब म फिक्का छु भन्न, म पारदर्शी सीमा सिलखडी छु अर्थ, त्यसैले यो द्रुत-ठीक सुन्तला र आफूले पछुतो मान्ने को streaks तर केही गर्न नेतृत्व. जब उहाँले (जानाजानी) म आत्म-टान्नर धारण चाहन्छु भने प्रश्न, म सफा आए (छैन शाब्दिक अर्थमा तापनि, जस्तै exfoliation को एक हप्ता संलग्न।) म के हुनेछ किन उहाँले मलाई सोध्नुभयो म विचार सुन्दर र दुर्लभ छाला टोन थियो. म कहिल्यै कसैले मेरो छाला तरिका उल्लेख सुने चाहन्छु, र म धातु बदबू एक उत्पादन संग अद्वितीय केहि परिवर्तन गर्न कोशिश त मूर्ख लाग्यो र मेरो पजामा र सेतो पोशाक muddied छोडेर.
हाम्रो साझेदार हामीलाई आफैलाई जस्तै हेर्न चाहनुहुन्छ, र हामी गर्नुपर्छ, साथै. यो एक डेटिङ प्रोफाइल फोटो तपाईं जस्तै केही देखिन्छ कि भइरहेको जस्तै, पहिचान को बिन्दुबाट photoshopped. हामी सबै अद्वितीय हुनुहुन्छ, र हामीलाई पनि फरक बनाउन ती कुराहरू हामीलाई भीड देखि बाहिर खडा बनाउन. आफ्नो वास्तविक चिह्नों देखाउन आत्मविश्वास फेला पार्न र अरूलाई 'Covet छैन.
बिरालोहरु को लागि को रूप, एउटै साँचो धारण. एक calico कुनै सुन्दर एक tabby भन्दा चिनो लगाइएको छ - यो beholder को आँखा मा सबै छ.
2. छैन शरीर लाज गर्नुहुन्छ: मेरो बिरालोहरु को दुई साना हो, दुई औसत निर्माण को हो, र दुई ठूलो. तिनीहरूले यो थाहा छैन. मेरो सबैभन्दा ठूलो बिरालो को बिरालोहरु आफ्नो आधा आकार मा फड्को र तिनीहरूले कुस्ती प्ले मिति संग खुसी छैनन् किन आश्चर्य. मात्र महिला रोक्न सकिएन भने हामी दुवै तुच्छ सम्भ्कनु शरीर-bashing र oddly सुविधा. हामी आकार र आकार को सबै प्रकार मा आउन, र अझै म मेरो साथी को धेरै मा जाने र बारेमा कथित शरीर कमजोरीको मा सुन्न. यी धारणा त कसरी मानिसहरू भिक्टोरिया गरेको रहस्य मोडेल को तुलना मा आफ्नो शरीर हेर्न बारे डर संग मिलेर छन्. आत्म-भाषणको त्यो प्रकारको हामी मात्र हाम्रो आफ्नै शरीर बारेमा बनाउन generalizations जान्छ, तर सामान्य मा शरीर. जब म जस्तै उद्धरण सुन्न म cringe, "रियल महिला सुडौल छन्।" सुन्दर महिला आकार सरणी आउन, त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्यप्रद फारम हामीलाई देख्नुहुन्छ जे आंकडा अँगालेको गरौं. मानिसहरू हाम्रो शरीर अलग आंसू सुन्न चाहँदैनन्, तिनीहरूले जित्न सक्दैनौं कहाँ र हामी सबै-पनि-अक्सर अवस्थामा राखे, कुनै कुरा आफ्नो प्रतिक्रियाहरू. केट Upton, केट Winslet, र केट मस सबै विभिन्न गराउँछ हो, तर तिनीहरू सबै सार्वभौमिक सुन्दर ठानिने छैन?
सबैभन्दा लामो समय को लागि, म मेरो खुट्टा पातलो छडी छैन भनेर खडा हुन सक्छ, त्यसैले मेरो आश्चर्य कल्पना क्रिस उहाँले मेरो खुट्टा प्रेम कि मलाई भन्नुभयो र म थप छोटकरीमा र स्कर्ट लगाउन भनेर सिफारिस गर्दा. सही व्यक्ति आफ्नो शरीर मन र यसलाई reshape तपाईं जबरजस्ती रहेको छ. सधैं सम्झना हो कि.
3. भोजनको आनन्द उठाउन: आह, व्यवहार को thrill. जब म enticement को झोला मिलाउ, मेरो बिरालोहरु सबै छ मेरा खुट्टा अगाडि चार्ज. जहाँ यो घटना हो तिनीहरूले बिन्दु खाना प्रेम. उनीहरूलाई कसले दोष सक्नुहुन्छ? यति धेरै महिला जस्तै, म पूर्ण एक बिकनी मा svelte महसुस गर्न को माथि-विख्यात शरीर लाज भोगे रूपमा म खाना युद्ध छेडा. म जब क्रिस र म पहिलो भेट भन्दा अब पाँच पाउण्ड थप वजन, तर त्यसको लागि बजार मा, म शुक्रबार राति टिभी binges समयमा उसलाई पिज्जा धेरै साझेदारी गरेको छु. म मात्रा मा कुनै पनि नम्बर लागि ती व्यापार छैन. म कहीं अधिक आरामदायक मेरो शरीर संग छु 31 म कहिल्यै मेरो युवा थियो भन्दा.
स्वस्थ भोजन एक अद्भुत कुरा हो, र म आफूलाई हेरचाह मा एक दृढ विश्वासी छु (तल हेर्नुहोस्।) जीवनको आनन्द उठाउने र यसको सबै स्वाद, यद्यपि, एक राम्रो ठूलो कुरा हो, साथै. र यो सँगसँगै भन्ने कुराकानी - तपाईं भोजन आनन्दित ट्रयाक गुमाउँछन् भनेर आफ्नो क्यालोरी सेवन यति धेरै ध्यान केन्द्रित नगर्नुहोस्.
4. आफैलाई हेरचाह: जब मेरो बिरालोहरु थकित छन्, तिनीहरूले सो. (तिनीहरू सबै बिल्कुल थकाइ छौं, खैर।) अर्को बिरालो तिनीहरूलाई upsets वा नियुक्त ठाउँ अतिक्रमण, तिनीहरूले voicing तिरस्कार कुनै नचाहनु छ. त्यसैले अक्सर, हामी हाम्रो मन बोल्ने भन्दा जोड, वा हामी कसैले हामी अरू कसैले व्यवहार छैन भनेर तरिकामा हामीलाई व्यवहार गर्छन्. बिल्ली, कि कुरा को लागि र पुरुष, फुफकार र यसबारे प्राप्त झुकाव, यसरी आफ्नो जीवन संग मा सार्ने र रिसले वा तीता मा पकड छैन. सामान्यतया तिनीहरूले व्यक्तिगत कुराहरू लिने छैन, र तिनीहरूले यो तपाईंको साँचो भावना एक चल्न बोक्न र पछि झटका भन्दा देखाउन दिनु राम्रो हो भनेर थाह.
इमानदारी सम्बन्ध मा महत्वपूर्ण छ, र सही साझेदार तपाईं बाहिर संसारमा loveable भन्दा कम भए तापनि तपाईं प्रेम गर्नेछ. के तपाईं साँच्चै चाहनुहुन्छ के आवाज सक्नुहुन्न भने, त्यसपछि कसरी आफ्नो साथी तपाईंलाई दिनुहुनेछ?
यो यस्तो कठिन छ, विशेष गरी agreeableness तिर प्रयास गर्ने हामी ती लागि. यो कुनै पनि मद्दत छ भने, तिनीहरूले तपाईंलाई भन्नुभयो थिए भने तपाईं ठेस लाग्न छैन भनेर तरिकामा शब्द कुराहरू विचार गर्न प्रयास. त्यो बाटो, तपाईं मुद्दा भन्दा निद्रामा गुमाउन बिना तपाईं के सोच्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ. अधिक तपाईं यो, अधिक स्वाभाविक यो तपाईं हुनेछ. मेरो घरमा, hissing र purring दुवै साधारण शोर हो, र तिनीहरूले दुवै आदर एक प्रकारको संकेत: अरूलाई र आफूलाई लागि.
5. क्षण मा अवस्थित: म सधैं कसरी मेरो बिरालोहरु क्रिस भिडियो खेल कसरी खेल्छ समान एक ध्यान संग चरा हेर्न छक्क छु. उच्च एडी मलाई फिर्ता ल्याउँछ जो - को गुलाब गंध रोक पुरानो adage एक कारण को लागि प्रसिद्ध छ.
मेरो पुरानो जूता संग्रह केहि भव्य रंग र strappy embellishments थियो, र म अझै पनि एकदम केहि जोडे सही पोशाक लागि मेरो कोठरी मा प्रतीक्षा छ, वा यो ध्रुवीय भंवर यसको पकड गुमाउन कम्तिमा लागि. जब क्रिस र म लस भेगास गर्न सँगै हाम्रो पहिलो यात्रा मा गए, म लगभग पाँच जोडे खचाखच, अनन्त sequins र प्वाँख होलान् (स्पष्ट, मेरो टाउको मा, भेगास एक नटी जस्तै ड्रेसिंग सके।) लगाएका म कसरी अन्त ती जोडी धेरै गरे? शून्य. बरु, मेरो लक्ष्य जुत्ता कि हप्ता ठोस पट्टी कुटपिट, र म यति आभारी म तिनीहरूलाई थियो महसुस सम्झना. असंख्य बालिका मंच जूता मा हाम्रो वरिपरि संघर्ष, peep-खुट्टाको औंलासम्म यातना द्वारा लङ्गडो. म भवदीय तिनीहरूलाई पीठ र केही दल-एड्स प्रस्ताव चाहन्थे, मेरो प्रारम्भिक बिसवां कि आत्म तिनीहरूलाई सँगसँगै संघर्ष गरेको थियो थाह पाउँदा.
मेरो बिरालोहरु गिलहरी-देख तिनीहरूले ठाउँमा फिर्ता आफ्नो फर चिकनी सक्छ बस यति मा सम्झना कहिल्यै, र म एक साथ म थोत्रो चप्पल क्रिस संग थियो रहनुहोस् सक्थे कहिल्यै4इन्च लिफ्ट. अक्सर, सबै भन्दा राम्रो बिदा मनाउन व्यावहारिक केही गरेर समझदार जुत्ता र खर्च घन्टा मा निर्भर.
जीवन वृद्धिको बारेमा सबै छ, र सम्बन्ध हामी चुक्छौं र सफल रूपमा हामीलाई राम्रो आफूलाई बुझ्न मदत गर्न सक्छ. त्यसै गरी, सम्बन्ध आत्मविश्वास लाभ उठाउन सक्छौं, जिम्मेवार इमानदारी, र अहिले र त्यसपछि केही व्यवहार मा indulging. आशा छ, हामी hisses को एक राम्रो सन्तुलन पाउन र (ज्यादातर) बाटो purrs.